Mozisi naAroni vanomira pamberi paFarao (1-5)
Kudzvinyirirwa kwevaIsraeri kunowedzera (6-18)
VaIsraeri vanopa Mozisi naAroni mhosva (19-23)
5 Pashure paizvozvo Mozisi naAroni vakapinda maiva naFarao vakati kwaari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Rega vanhu vangu vaende kurenje, vanondiitira mutambo.’” 2 Asi Farao akati: “Jehovha ndianiko,+ kuti nditeerere inzwi rake ndorega Israeri achienda?+ Jehovha wacho handitombomuzivi, uyezve, handisi kuzorega Israeri achienda.”+ 3 Asi vakati: “Mwari wevaHebheru akataura nesu. Tiri kudawo kuenda rwendo rwemazuva matatu kurenje, kuti tinopa Jehovha Mwari wedu zvibayiro;+ tikasadaro anotirova nedenda kana kuti nebakatwa.” 4 Mambo weIjipiti akapindura kuti: “Mozisi naAroni, muri kubvisirei vanhu pabasa ravo? Dzokerai munoshanda uko!”*+ 5 Farao akaenderera mberi achiti: “Onai kuwanda kwaita vanhu munyika, asi muri kuda kuti vatombozorora havo pabasa ravo.” 6 Zuva iroro chairo, Farao akarayira vaya vaishandisa vanhu nevatungamiriri vavo, achiti: 7 “Musaramba muchipa vanhu uswa hwekugadzirisa zvidhinha.+ Vasiyei vanozvitsvagira vega. 8 Asi hamufaniri kuderedza mugwazo wavo wezvidhinha. Musambouderedza, nekuti vari kutoita zvavo zvekutamba.* Ndokusaka vari kuchema vachiti, ‘Tinoda kuenda, tinoda kunopa zvibayiro kuna Mwari wedu!’ 9 Vafondotsei uye itai kuti vagare vari pabasa kuti varege kuteerera mashoko enhema.” 10 Saka vaya vaishandisa vanhu+ nevatungamiriri vavo vakabuda, vakati kuvanhu vacho: “Zvanzi naFarao, ‘Handicharambi ndichikupai uswa. 11 Endai munotsvaga mega uswa chero kwamunenge mahuwana, asi basa renyu harisi kuzoderedzwa.’” 12 Vanhu vakabva vapararira nenyika yese yeIjipiti vachitsvaga mashanga panzvimbo peuswa. 13 Uye vaya vaivashandisa vakaramba vachivaudza kuti: “Munofanira kupedza basa renyu repazuva, sezvamaiita pamaipiwa uswa.” 14 Uyewo vatungamiriri vebasa vevaIsraeri, vaya vakanga vagadzwa nevakuru vebasa vaFarao, vairohwa.+ Vaivabvunza kuti: “Sei musina kupedza mugwazo wenyu wezvidhinha wamaisipedza? Nezuro hamuna kupedza uye nhasi hamunazve kupedza.” 15 Saka vatungamiriri vebasa vevaIsraeri vakapinda vakatanga kugunun’una kuna Farao vachiti: “Sei muri kuitira varanda venyu zvakadai? 16 Varanda venyu havasi kupiwa uswa asi ivo vari kutiti, ‘Foromai zvidhinha!’ Varanda venyu vari kurohwa, asi mhosva iri yevanhu venyu.” 17 Asi iye akati: “Muri kuita zvekutamba,* kutamba chaiko!*+ Ndokusaka muri kuti, ‘Tinoda kuenda, tinoda kunopa zvibayiro kuna Jehovha.’+ 18 Saka chiendai, dzokerai kubasa! Hapana uswa hwamuri kuzopiwa, asi munofanira kusvitsa mugwazo wenyu wezvidhinha.” 19 Vatungamiriri vebasa vevaIsraeri vakaona kuti vakanga vapinda mutsekwende pazvakanzi: “Hamutombofaniri kuderedza mugwazo wezvidhinha zvamunofanira kuforoma pazuva.” 20 Pashure paizvozvo vakasangana naMozisi naAroni, avo vakanga vakavamirira pavaibva kuna Farao. 21 Vakabva vangoti kwavari: “Jehovha ngaaone zvamaita uye ngaakutongei, sezvo maita kuti Farao nevashandi vake vativenge uye maisa bakatwa muruoko rwavo kuti vatiuraye.”+ 22 Mozisi akabva atendeukira kuna Jehovha akati: “Jehovha, nei marwadzisa vanhu ava? Makanditumirei? 23 Kubvira pandakapinda ndikamira pamberi paFarao kunotaura ndichishandisa zita renyu,+ abva atowedzera kuitira vanhu ava zvakaipa,+ uye hamuna kana kumbonunura vanhu venyu.”+
^ Kana kuti “munotakura mitoro yenyu.”
^ Kana kuti “nekuti inyope.”
^ Kana kuti “muri nyope.”